कहिलेसम्म दर्शक किनेर ‘स्टार’ बन्ने ? अनमोलको ‘कृ’ चलाउन दर्शक किनिए | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
कहिलेसम्म दर्शक किनेर ‘स्टार’ बन्ने ? अनमोलको ‘कृ’ चलाउन दर्शक किनिए
| 385 Views | Published Date : 13th February 2018 |
काठमाडौँ । यतिबेला हलहरुमा नेपाली चलचित्र ‘कृ’ लागिरहेको छ । ‘कृ’ यो बर्षकै सबै भन्दा ठूलो बजेटमा बनेको चलचित्र हो । चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा युवास्टार अनमोल केसी देखिएका छन् । उनको यो दुई बर्ष पछिको कमब्याक हो । चलचित्रलाई नेपाली दर्शकले निकै कुरिरहेका थिए ।
लामो समयसम्म चलचित्रको कुनै अत्तोपत्तो नलागेपछि चलचित्र आउँछ या आउँदैन भन्ने अन्योलसमेत सिर्जना भएको थियो । तर, अनमोलको स्टाडमबाट ढुक्क भएर होला निर्माण टिमले प्रचार प्रसारमा त्यति ध्यान दिएनन् । दुई बर्षसम्म पनि चलचित्रको छायांकन नसकेर चलचित्र रिलिजको एक हप्ता अगाडि चलचित्रको रोमान्टिक गीत सुटिङका लागि निर्माण युनिट स्कटल्यान्ड पुग्यो ।
चलचित्रको पहिलो गीतलाई ३ महिना लगाए खिचिएको अनमोल आफैले बताएका थिए । तर चलचित्रको दोस्रो गीतका लागि भने चलचित्रको प्रचार गर्न छाडेर निर्माण युनिट स्कटल्यान्ड उड्यो । हतारको काम बिग्रिन्छ भनेझैं चलचित्रको ‘मैले जानी नजानी’ बोलको गीतले न हाइप पायो न तारिफ । किनकि गीतमा कोरियोग्राफी निकै कमजोर र हतारमा गरेको भनेर स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।
शुक्रबार चलचित्र हलमा पुग्दा ‘कृ’सँगै बलिउड चलचित्र प्याडम्यान पनि हलमा लाग्यो । शुक्रबार चलचित्र ‘कृ’ले सोचेको जस्तो ब्यापार गर्न सकेन र हलवालाले शनिबार ‘कृ’को शो घटाए । तर शनिबार चलचित्रले अचम्मित पार्यो । एक्कासी चलचित्र सबै हलमा हाउसफुल भएको खबर बाहिर आयो ।
चलचित्रले मल्टिप्लेक्समा धेरै शो नपाएपनि स्मल थिएटरमा भने राम्रो शो पाएको थियो । हलमा दर्शक पनि उतिकै देखिए तर सबै दर्शक ‘कृ’ हेर्न आएका थिएनन् । बलिउड चलचित्र प्याडम्यान पनि हेर्न आएका थिए । दर्शक मिसिएका कारण अनमोलको क्रेज ज्यादा देखियो । चलचित्रलाई क्रिटिक्सहरुले हेरेर प्रतिक्रियामा यो बर्षकै कमजोर चलचित्रको उपाधि दिए चलचित्रको स्क्रिप्ट एकदमै कमजोर रहेको तर अनमोलले गरेको मेहनत देखिएको थियो ।
चलचित्र ‘कृ’ ले दोस्रो दिन दर्शक त पायो तर ती सबै दर्शक आफैं हलसम्म पुगेका थिए वा उनीहरुलाई हलसम्म पुर्याइएको थियो भन्ने प्रश्न यतिखेर उब्जिएको छ । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले यस्तै देखाउँछन् । राजधानीमा आईतबार चलचित्र ‘कृ’को पनि विशेष शो राखिएको थियो जहाँ पत्रकार र रंगकर्मीको पनि उपस्थित रहेको थियो । भीड त्यहाँ पनि थामिनसक्नु नै थियो तर त्यहाँ सबै किनिएका दर्शकको मात्र उपस्थिति रहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
कार्यक्रममा जब अनमोलको प्रवेश भयो दर्शकलाई हुटिङको लागि आग्रह गरियो । यस्तो आग्रह निकै अस्वभाविक देखिन्थ्यो । अनमोल सदाझै बडीगार्ड सहित उपस्थित भएका थिए । केही फ्यान हातमा पूmलहरु लिएर बसेका थिए । एक एक गर्दै अनमोलले पनि फूल लिएका थिए । अनमोलसँगै चलचित्रकी नायिका अदिती बुढाथोकी र अनुप बिक्रम शाही पनि थिए र, जसले अनमोललाई हुटिङ गरेका थिए उनैले अनुप र अदितीलाई पनि हुटिङ गरिरहेका थिए ।
यसले बुझ्न सकिन्छ ती फ्यान प्रायोजित थिए । एकै चलचित्रका तीन फरक फरक कलाकारका फ्यान एउटै हुनु अस्वाभाविक मानिन्छ । अर्थात ती फ्यान सबै किनिएका थिए । नेपाली दर्शक र मिडियालाई कहिलेसम्म किन्ने र किनिएका फ्यान देखाएर कहिलेसम्म खल्लो स्टाडम देखाउने ? चलचित्रकर्मीले बुझ्ने कुरा हो सधैभरि दर्शक किनेर चलचित्र रिलिज गर्ने हो भने चलचित्र नबनाउँदा पनि हुन्छ । अनमोललाई साच्चिकै मन पराउने दर्शक पनि छन् उसका रियल फ्यानहरु पनि छन् तिनीहरुलाई पक्कै नराम्रो लाग्न सक्छ ।